Brezila: “Ataovinareo irery” Diovy ny Fifidianana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Septambra 2010 13:18 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Swahili, 繁體中文, 简体中文, Português, Español, English
[Ity lahatsoratra ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny bilaogin'ny Ushahidi. Ny Ushahidi dia fitaovana malalaka fanaovana tatitra mampiasa ny sarintany natsangana tany Kenya nandritra ny olan'ny taona 2008 sady nanomboka teo dia nampiasaina hitrandrahana loharanom-baovao avy any ifotony maneran-tany.]
Ankizy mpianatra teren'ireo mpampianatra azy ireo hiventy ny anaran'ireo mpirotsaka hodifiana. Mpiasam-bahoaka roahana satria tsy nanao fampielezan-kevitra ho an'ny lehiben'izy ireo. Tafo fanitso atakalo vatom-pifidianana. Varoboba ny mombamomba ireo olona mpifidy atao amin'ireo mpanao fampielezan-kevitra. Fandrahoana ho faty atao an'ireo mitoroka heloka bevava momba ny fifidianana.
Tongasoa eo amin'ny lafy maharikorikon'ny fifidianana Breziliana.
Ireo dia sombintsombiny ihany amin'ireo tatitra avy amin'ny Eleitor 2010, tetikasa iray “fanangonam-baovaoa ifotony” mikendry ny hanamorana ny fitateran'olon-tsotra ireo fanitsakitsahana ny lalam-pifidianna any Brezila.
Eo anivon'ny demokrasia lehibe indrindra any Amerika Latina – ahitàna mpifidy maherin'ny 120 tapitrisa – tamin'ity taona ity, hamonjy biraom-pifidianana ireo mpifidy ary hifidy izay hisolo ny iray amin'ireo Filoham-pirenena isan'ny nalaza teo amin'ny tantaran'ny firenena (Luiz Inácio “Lula” da Silva) nefa koa sady hifidy ireo governora, ampahany betsaka ao amin'ny Kongresy.
Samy manana ny politikany sy ny zavatra kidaladalany manokana avy ny firenena tsirairay. Na dia ny demokrasia faran'izay bitika indrindra aza dia manana ny lalàna mifehy ny fifidianany, ny fomba fandatsaham-bato, ary miantoka fa ny fanjakana no handrindra ny fizoran'ny fifidianana.
Brezila no isan'ny voalohany amin'ireo demokrasia mitovy lenta aminy mampiasa ny fitaovana elektronika amin'ny fifidianana. Manana ihany koa izy ny fifidianana terena. Saingy tokana an-tany ny endrika hafa amin'ny dingam-pifidianany, isan'izany ny ezaka ho fanaraha-maso hentitra ny fampielezan-kevitra anaty aterineto, ny fividianana vatom-pifidianana ary izay antsoina hoe “showmícios” (seho an-tsehatra-famoriam-bahoaka).
Brezila dia manana lalàna mifehy ny fifidianana mazava tsara sy mora takarina saingy ny olana dia ny fampiharana ireny lalàna ireny.
Tena misy marina tokoa ny kolontsain'ireo mpanao politika manitsaka ny lalàna, mamikotra amina toerana misy tombontsoa toy ny hoe lehiben'ny fifidiana any Brezila. Io dia manana ny fotony lavitra be tany amin'ny vanim-potoanan'ny fanjanahana ary nitohy nametraka tsy fitoviana raiki-tampisaka, izay maha-voatazona fotsiny amin'izao ny tombontsoan'ireo sangany.
Ny hevitra fonosin'ny Eleitor 2010, izay tena an-tsitrapo tsotra izao, tetikasa tsy miandany izay tarika virtoaly no mampihodina azy tsy misy famantsiam-bola akory, dia ny hanome andraikitra ny mpifidy aorian'ny androm-pifidianana. Raha ny voalazan'i Paula Góes sy Diego Casaes, mpamorona azy ity – izay nifanena tao amin'ny Twitter ary ankehitriny dia miara-mifarimbona ho an'ny Global Voices Online, ilay tetikasa dia ho fanomezan-danja ny maha olom-pirenena sahy manakiana sy mavitrika, izay mifaninana amin'ny sasany amin'ireo fomba fanao maizimaizina sy mifanohitra amin'ny demokrasia voatanisa tetsy ambony.
Eleitor 2010 dia mihodina eo ambonina sehatra rindrambaiko malalaka Ushahidi, sehatra iray mitoetra eo amin'ny tranonkala izay misarika ny saina tokoa noho ny zava-bitany namoahana an-tsarintany ny zava-doza taorian'ny horohorontany tany Haiti, amin'ny alalan'ny SMS avy eny ifotony (an-kianja).
Tsy mbola tena nahatratra ny tena tanjany anefa ny Ushahidi amin'ny maha-sehatra fanaraha-maso ny fifidianana azy, hoy Góes sy Casaes. Miaraka amin'ny fisian'ny 25% miditra aterineto manerana ny firenena isanandro, sy ny maha iray isan'ny manana taha avo indrindra amin'ny fampiasana ny finday any Amerika Latina azy, manantena izy ireo fa amin'ity taona ity dia i Brezila no ho toerana hahamatotra azy io. Herinandro efatra mialoha ny fifidianana, efa manana tatitra maherin'ny 230 sahady ny Eleitor 2010, avy amin'ny faritra rehetra manerana ny firenena, ary avy amin'ireo faritra tena lavitr'andriana.
Na izany aza, tolona lavitr'ezaka isanandro ny fandefasana hafatra ho fampahafantarana ilay sehatra, ao anatina firenena izay mbola tena matanjaka/manjaka tokoa ny fampielezam-peo sy ny gazety an-tsoratra, eo am-pelatanan'ireo sangany manana tombontsoa ka tsy manana tanjona afa-tsy ny hiarovana izany.
Na misy an'io aza anefa, nahasarika ny sain'ireo mpampahalala vaovao ny ekipan'ny serasera avy amin'ny Eleitor 2010, ary tena nitàna toerana lehibe tamin'izany ny asa fifarimboana tanaty tambajotra niarahana tamin'ireo fandraisan'andraikitra mangarahara hafa teo amin'ny aterineto. Tsy ela akory izay dia navoitran'ny Google tao anatin'ny pejiny natokana ho an'ny fifidianana Breziliana ny Eleitor 2010.
Manantena i Góes sy Casaes fa avy amin'ny fanentanan-dry zareo ho fandraisan'andraikitra – any amin'ireo tambajotra sosialy toy ny Orkut izay ahitàna mpampiasa maherin'ny 40 tapitrisa, fiaraha-miombon'antoka amin'ireo tambajotrana trano mpanome tolotra aterineto (cybercafé), ireo ONG (fikambanana tsy miankina), ary ireo hetsika ara-tsosialy – i Eleitor 2010 dia handrava sy hanova ny fomba fanaon'ireo mpifidy an'arivony mirotsaka amin'ny resa-pifidianana.
Tamin'ny alalan'ilay sehatra, tantara mahatsikaiky vitsivitsy sahady no efa niseho masoandro, mialoha lavitra ny fifidianana ny 3 Oktobra.
Lehilahy iray no tratran'ny olona tao amina tanana kely iray tao afovoan’ ny firenena nivrotra kaonty Twitter misy mpanaraka maherin'ny 40,000 tamina vidiny ambany dia ambany 125 dolara Amerikana. Tsy ara-dalàna izany raha ny lalam-pifidianana Breziliana. Rehef a nifanatrehana, dia nanome porofo mampivarahontsana ilay lehilahy voatanisa etoana ary avy eo nandrahona hitory ny Eleitor 2010. Ny porofo, ahitàna dikasarina fàfana sy dikan'ny tsaty nifanaovana taminy, dia natolotra ho an'ny Fitsarana misahana ny Fifidianana.
Tatitra hafa mahatsikaiky avy any São Paulo, izay andrisihan'ireo mpampianatra amin'ny fomba tsy ara-dalàna ny mpianany hankalaza olona roa mpirotsaka ho fidiana, ny iray ho ben'ny tanàna ary ny iray ho Filoham-pirenena, ary dia nifototra ity izy satria tampotampoka teo dia nihiaka ny “Lula!” “Lula!” ireo mpianatra. Niely patrana eran-tany ilay video, ary efa 70,000 mahery no isan'ireo mpijery azony.
Video iray hafa nampivanaka sy nahavariana ny iray an'i Ricardo Gama, mpitoraka bilaogy, misy fiarabe VW an'ny Lapan'ny tanàna nampiasaina tamin'ny fampielezan-kevitra tao Rio de Janeiro. Miventy ilay mpitoraka bilaogy: “Mitatitra mpanao fampielezan-kevitra ho amin'ny fifidianana amin'ny fiaraben'ny Lapan'ny tanàna ve ianareo? Heloka bevava arapifidiana izao! Nalaiko sary iyy. Hitory anareo aho.
Avy tany avaratr'i Brezila indray, tao amin'ny tanànan'i Maranhão, tonga tany ampoto-tsofin'ny Eleitor 2010 ny feo fa hoe ny tambajotran'ny fiangonana evanjelika iray dia mifampiraharaha “hanome” vato miisa 3,000 ho takalon'ny “fanohanana” aorian'ny fifidianana. Ao an-tanànan'i São Paulo, mpitarika ara-pivavahana iray no miangavy ny mpino tsy hanohana an'i Dilma Roussef, nofidian'ny Filoha Lula ho mpisolo azy.
Ireo ohatra rehetra ireo dia maneho ny ho filàna an'ity sehatra sy fitaovana fandraisan'anjara mandalo aterineto ity afaka taona vitsy. Tsy olana na ho lasa lasa “areti-mifindra” sy hanjary ho anara-malza izy ity, ny Eleitor 2010 sy ireo fandraisana andraikitra mangarahara hafa dia efa nanjary lasa mpilalao mpitondra fiovàna amin'ny fifidianan'ity taona ity.